रोकिएन मानब तस्करी: डिपार्टमेन्ट अफ युथ नै संलग्न | www.sidhakurausa.com
अमेरिकामा नेपालबाट मानव तस्करीको शृंखला रोकिएको छैन । नेपाली तस्करहरुमा चेतनाको अभाव नै यसको प्रमुख कारण हो । केहि सिमित व्यक्तिहरुको यो धन्दा सीधाकुरालाई राम्ररी थाह छ । बिगत १५ बर्षदेखि सीधाकुराको यो बिशेष चासोको बिषय भएकोले मानव तस्करी सम्बन्धि हुने खुला र गोप्य सबै सुचनाहरु सीधाकुरामा तत्काल आईपुग्छन । आज अपरान्ह यस्तै एउटा गोप्य सम्बाद सीधाकुराले सिधै समात्न सफल भयो ।
मानव तस्कर पश्चिम नेपालको अर्घाखाँचीबाट काठमाडौँ आयो र जिबिकोपार्जनको सिलसिलामा काठमान्डूमा अबस्थित एउटा जापानी परियोजना ”जाइका” मा केहि बर्ष काम गर्न सफल भयो । जाइकाले उसलाई एउटा अन्तरास्ट्रिय कार्यक्रममा अमेरिका पठायो, त्यसअघि उसलाई जाइकाले एउटा सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरायो- कार्यक्रम सकिए पछि तुरुन्त नेपाल फर्कने तर उसले त्यो सम्झौता पत्रको ठाडो उल्लङ्घन गर्यो र न्युयोर्कमा लुकीछिपी बस्न थाल्यो । उसले कसरी ग्रिन कार्ड बनायो त्यो बारेमा नभनौं । जब मान्छेको नियत मै खोट छ भने इन्द्रेको बाउ चन्द्रेसंग गरेको सम्झौता समेत नेपालीले मान्दैन । कुनै नेपालीलाई कुनै देशको कानूनले छुदैन । उसलाई कसैको मतलब हुँदैन, त्यहि भयो अर्घाखाँचीबाट काठमान्डू र काठमान्डूबाट अमेरिका आउने व्यक्तिलाई ।
त्यो व्यक्ति न्युयोर्कमा बस्दा बस्दै न्युयोर्कको रिजवूडकै नेपाली समाजको ठुलो मान्छे भयो । उ रिजवूड नेपाली समाजको अध्यक्ष पद खान सफल भयो । आफु अध्यक्ष भए पछि उसले १७ जना नेपालीहरुलाई न्युयोर्क आयात गर्न अमेरिकी दूताबास काठमान्डूमा समाजको लेटर हेड पठायो । सीधाकुरा सुत्रका अनुसार ११ जना व्यक्तिहरु न्युयोर्क आए र उसले न्युयोर्कमा ग्रोसरी स्टोर थाप्न सफल भयो । कतिपय नाउ चलेका व्यक्तिहरुसंग पनि उसले पार्टनरशिपमा व्यापार गर्यो । उसको कारण त्यो ब्यापार धरासायी भयो ।
त्यहि व्यक्तिलाई अत्यन्त अवसरबादी व्यक्तिहरुले बोकेर हिड्न थाले, उ बताउथ्यो -अमेरिकी दूताबास काठमान्डूमा पत्र दिनासाथ् भिसा दिन्छ । उसले पत्र पठाएर अमेरिका भित्र्याएका व्यक्तिहरुले त्यो प्रमाणित गरेका पनि थिए ।
धन्दा संचालन गरेकै समयमा रिजवूडमा मन्दिरको नाउमा उसले आफ्ना दाजु भाउजुको आयात गर्ने योजना बनायो र अमेरिकी दूताबास काठमान्डूमा रिजवूड समाजको सिंगो बोर्डलाई पत्तै नदिई पत्र पठायो, जुन सीधाकुराले पकडी हाल्यो र सार्बजनिक गरिदियो, उसले रिजवूड समाजबाट हात धोएर चुपचाप बस्न थाल्यो ।
उसको नियत खोटोछ भन्ने कुरा सीधाकुराले उहिले भनिदिएको हो तर यत्रो बेइमान व्यक्तिलाई एनआरएन अमेरिकाका तत्कालिन अध्यक्ष डाक्टर केशव पौडेलले बिस्वास गरे र उसलाई एनआरएन अमेरिकाको बोर्ड सदस्यमा जिताए । डाक्टर पौडेल पनि उही गोत्रका मान्छे हुन् भन्ने कुरा ग्रिन सिटि अस्पतालका केहि भगौडाहरुलाई अमेरिका आयात गर्ने उनको मनसुवा त्यो व्यक्तिसंग मेल खान्थ्यो र आपसी मिलेमतोमा उनीहरुको तस्करी बिध्या सफल पनि भयो ।
एक पटकको नेपाली सधै नेपाली
“एक पटकको चोर सधै चोर”
चोर बिध्या सिकेको व्यक्तिले जीबनभर अपनाउने पेशा हो चोरी । तस्करको पनि त्यहि पेशा हो । मान्छे किनबेच गर्न पल्केको ब्यापारीले कहिले चामल पसल थाप्दैन । मान्छे चोर्न र बेच्न सफल व्यक्तिको सपना हुन्छ – एउटा बेच्दा २० लाख रुपैया हुन्छ, त्यस्तो व्यक्तिले काम गरेर पनि खाँदैन, उसलाई नैतिकताको मतलब हुँदैन, उसलाई इमान जमानको मतलब हुदैन । एउटा मर्यो भने २० लाख फल्छ भन्ने उसको सिद्दान्त हुन्छ ।
चोरलाइ सेफको ताला साँचो दियो भने चोर्दैन भन्ने नेपाली उखान पनि साँचो होइन, उसले सेफको पैसा मात्र होइन ताला साँचो पनि चोरेर लान्छ ।
चोर्दा चोर्दै चोर नेपाली समाज हुँदै पक्का अमेरिकी चोर
नेपालबाट मान्छे चोरेर किनेर ल्याएर अमेरिकामा बेच्ने आदत भएको व्यक्ति न्युयोर्क सिटिको डिपार्टमेन्ट अफ युथ एण्ड कम्युनिटी डिभलपमेन्टको सदस्य बन्न सफल भयो । डिमोक्रेटिक पार्टीको दलाल क्राउलीको चुनाव प्रचारक भयो, टिपीएसधारी, असाइलमधारी, केहि ग्रीनकार्डधारीहरुलाई बोकेर उसले क्राउलि कहाँ पुर्यायो र उनीहरुको नाउमा डलर खायो । अन्तमा क्राउली हार्यो, उसले खाएको पाचन पनि भयो । त्योसम्म ठिकै थियो । नेपालीले अर्काको भेटे अलकत्रा ३ पाथी पिउछन भने त्यो त अमेरिकनको किन छोड्थ्यो?
डरलाग्दो मानव तस्करी?
तर आज देखिदैछ डिपार्टमेन्ट अफ युथ एण्ड कम्युनिटी डिभलपमेन्टको लेटर हेड पो उसले नेपालबाट २ जना नेपालीलाई न्युयोर्कमा तस्करी गराउन प्रयोग गरेछ । उसले २ जना भोका नेपालीहरुलाई पठाएको निमन्त्रणा पत्र सीधाकुराको मेसेन्जरमा टुप्लुक्क झुल्कियो । थाह भयो न्युयोर्क सिटिको युथ एण्ड कम्युनिटी डिभलपमेन्ट नेपालबाट मान्छे अमेरिका बेच्ने संस्था रहेछ ।
उ त्यो संस्थालाई भजाएर नेपालबाट मुकुन्द राज पाण्डे र सिब सिटौलालाई न्युयोर्क ल्याउन कसरत गर्दै रहेछ । अस्ति जुन २५ देखि आगामी जुलाई ५ भित्र अमेरिका प्रबेस गराउने उसको निमन्त्रणा पत्रमा उल्लेख छ । को हुन पाण्डे र सिटौला? किन उनीहरु न्युयोर्क आउनु पर्ने? कसले उनीहरुको स्पन्सर गर्ने? यो सबको जिम्मेवार व्यक्ति हुन – रिजवूड समाजका पूर्ब अध्यक्ष तथा न्युयोर्क सिटि डिपार्टमेन्ट अफ युथ एण्ड कम्युनिटी डिभलपमेन्टका सदस्य महामहिम मोहन ज्ञवाली ।
अमेरिका र बिस्वभर रहेका नेपालीहरुको संजाल एनआरएनएले जानी राखोस मोहन ज्ञवालीका बारे । अर्घाखाँचीका तन्नमभोगी आज न्युयोर्क राज्य सरकारको डिपार्टमेन्ट अफ युथ एण्ड कम्युनिटी डिभलपमेन्टलाई यहाँसम्म दुरुपयोग गर्न दुस्साहस गर्छ भने मेयर ब्लाजियो लगायत डिपार्टमेन्ट चिफ, न्युयोर्क सिटीका हाउस मेम्बर, सेनेटर र गभर्नर जो कोहिले किन्न सक्ने व्यक्ति रहेछन भन्ने बुझ्नकै लागि पनि सीधाकुराले पर्सि सोमबार बिहान न्युयोर्क राज्य सरकारका सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गरी मोहन ज्ञवालीको हैसियत बुझ्ने कोशिस गर्नेछ
पाण्डे र सिटौलाको भबिस्य?
पाण्डे र सिटौला अमेरिका आए नआएको खबर पक्का छैन, पर्सि सोमबार बिहान अमेरिकी दूताबास काठमान्डूमा सम्पर्क गरी पत्तो गरिनेछ । मानव तस्कर ज्ञवालीको धन्दाको सार्बजनिक रुपमै प्रतिकार हुन्छ ।
के मानव तस्कर ज्ञवालीलाई नेपाल र अमेरिका दुवै देशको बद्नाम गर्ने नियतले कसैले जन्म दिएको हो? त्यसको सीधाकुराले निरन्तर अनुसन्धान गरिरहनेछ ।